Efa ela izy ireo no nitaky ny valin-kasasarany sy ny ho fiakaran’ny mari-karamany manoloana ny andraikitr’izy ireo kanefa heverin’izy ireo fa mikarama vary masaka. Tsy nahitam-baliny hatrany ny fitakiana am-pilaminana miaraka amin’ny zo hafa ka nanapa-kevitra tsy hampianatra izy ireo omaly tolakandro. Noraisin’ny tompon’andraikitra ho hadisoana bevava io ka nivoaka ny didy fa tapaka avy hatrany ny fifanaraham-piaraha miasa. Fepetra napetrak’ireo tompon’andraikitra mpitantana ny AFT Andavamamba avy hatrany ny fanavaozana fifanekena arak’asa vaovao mialoha ny rahampitso 1 aogositra raha mbola te hanohy ny fampianarana. Araka ny fampitam-baovao azo hatrany, hampanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety ireto mpiasa mihoatra ny 60 ireto ato ho ato. Tsy nandrenesam-peo kosa ireo mpampiasa. Midika izany fa hisedra olana ity ivontoeram-pianarana teny frantsay ity raha ireo mpiasa maro be ireo no indray hiala. Tsiahivina moa fa amin’ny vakansy toy izao no tena mampandeha ny fampianarana sy ny tsena. Ao anatin’ny sata ny tsy fitadiavam-bolan’ny Alliance française saingy vola be no miditra raha ny dingana enina avy ao anatin’ny sokajy A1,A2, B1, B2, C1, C2.